Nei Vashandisi Vachiramba Ne Email Yako | Martech Zone
Vakawandisa vatengesi veemail vanowira mumutinhimira mavanotumira email zvichibva pahurongwa hwavo hwekambani kana zvinangwa zvavo kwete pane zvinodiwa nevanyori. Kupa maemail kune vateereri vako uye kuona kuti vakakosha kunovachengeta kunyoreswa, kuroorwa, kushandurwa… uye pakupedzisira kuchakuchengetedza kubva kune yavo junk email dhairekitori.
Mushure mekushanyira webhusaiti yako, kutenga, kana kugumburwa pablog rekambani yako, mutengi akasaina kuti agamuchire email kubva kwauri. Kune mushambadzi, uhu ndihwo hwakanyanya kusimba, hukama hwakaomarara kuchengetedza, uye nhanho imwe isiriyo inogona kuperera munhamo netsamba yako yemagetsi mufolda ye spam.
ichi Litmus infographic inopa kutarisisa kwekuita maitiro ekutsvagisa maitiro eGmail neHotmail, zvikonzero nei vanyori vakadzingwa neemail, uye matipi ekuwedzera kubatanidzwa.
Tags: eemail firitaEmail MarketingKubatanajunk firitaspamspam firitakusazvinyora
Huddle: Kubatana kwepamhepo uye Kugovana Faira
Izvo zvakakosha kugovera yako email runyorwa kana zvichibvira. Haasi munhu wese anosaina ane zvakafanana zvinodiwa. Kana iwo meseji isina kukodzera nguva dzese ungazorasa iwo.